ओ बेबी ओ, पुष्पल र श्रृष्टीको रोमान्स हेर्ने हो ? (भिडियो) « Mazzako Online
ओ बेबी ओ, पुष्पल र श्रृष्टीको रोमान्स हेर्ने हो ? (भिडियो)
निर्देशकको निर्देशनसंगै भिडियो क्यामरामा कैद गरिन्छ । त्यसपछि मात्र सम्पादकले आफ्नो कला देखाउँछ । नेपालमा निर्माण हुने म्यूजिक भिडियोमा आफुलाई अब्बल बनाई सकेका सम्पादक हुन् नीशान घिमिरे । उनले सम्पादन गरेका भिडियोले मज्जाको तारिफसंगै धेरै अर्वाड समेत जिते । पछिल्लो समय उनै नीशानले निर्देशनमा समेत हात हालेका छन् । उनले, निर्देशन गरेका हरेक भिडियोहरुले तारिफ बटुल्ने गरेका छन् ।
यतिखेर नीशानले ‘ओ बेबी’ बोलको गीतको भिडियो निर्देशन गरेका छन् । कुन्दन पाठकको स्वर रहेको यो गीतलाई प्रेम दिवस लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा, कञ्चन पाठक र मदन भण्डारीको शब्द, कञ्चन पाठककै संगीत छ । भिडियोमा मोडल पुष्पल खड्का र श्रृष्टीलाई रोमान्टिक अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विकाश दाहालले सम्पादन गरेको भिडियोलाई अर्जुन तिवारी र उनको टिमले खिचेको हो । सुरेन्द्र बसेलले भिडियोमा कोरियोग्राफी गरेका छन् । निर्देशक घिमिरेले प्रेम दिवस नजिकिदै गर्दा श्रोता तथा दर्शकले यो गीतमा प्रेमको भाषा भेट्ने बताए । उनले, प्रेम गर्ने जोडीले भिडियोमा आफूलाई पाउने समेत दाबी गरेका छन् ।
भुवन चन्दको ‘साइनो’, नीता र मिरुनासंगै नव नायक राजकुमार
अष्ट नारायण हललाई ‘गुनगुन’ निर्माताले गरे क्षतिपूर्तिको माग
अष्ट्रेलियामा दीपासँग रोमान्टिक दीपक
सुदर्शनलाई ३० लाख ?
प्रदिप र साम्राज्ञी पक्का